Ubuntu Web 20.04.2 inosvika nechitoro chitsva uye webhusaiti nyowani | Linux Vakapindwa muropa
Pakati paNovember 2020, ivo vanogadzira kuseri Ubuntu Unity Remix vakakanda yekutanga vhezheni yechimwe chirongwa chako. Chimwe chinhu chavari kushanda pane imwe nzira kune Chrome OS, imwe yakavakirwa paUbuntu uye inoshandisa Firafox kumhanyisa yavo webhu kunyorera. Masikati ano ivo vaparura chikamu chechipiri cheiyi inoshanda system, a Ubuntu Webhu 20.04.2 izvo zvinouya nenhau, asiwo nekuonekana kwechinguva.
Zvinotaridza kuti ichi chisina kunaka unhu hweUbuntu achiri kuyedza kuuya neakanakisa mushandisi interface. Kekutanga kuiyedza, yaive ne "Windows-senge" pani yepasi, ndokuti nemenyu pazasi kuruboshwe, mamwe mapini akapihwa uye tray system kurudyi. Ini ndichangobva kuyedza, kuivandudza uye chifananidzo chazove chakawanda GNOME, uye ikozvino tinoona musoro wekutora mune izvo mifananidzo iri pakati sezvinoita kunge ichave muWindows 11, asi kana tikadhinda iyo ISO yeUbuntu Web 20.04.2 tinoona kuti panhare inodzokera kwayakatangira.
Chii chitsva muUbuntu Web 20.04.2
Izvo zvitsva zvakaverengerwa mune ino yechipiri ISO zvakapfupikiswa muzvitatu:
Iyo Webhu Chitoro yakatsiviwa ne / e / chitoro uye inosanganisira akawanda akawanda mawebhu-maapp.
Yakagadziriswa bhagi iyo yakadzivirira dash-to-pani kubva kurodha.
Anbox rakabviswa kwenguva pfupi nekuda kweshanduko yazvino yekernel ichityora kuenderana.
Kune imwezve ruzivo isingaenderane neiyo inoshanda system pachayo, asi nemaitirwo ayo: vakavhura peji ubuntu-web.org kukwanisa kuwana rumwe ruzivo, senge masocial network uye mamwe ma link kubva kwaunogona kurodha pasi Ubuntu Web 20.04.2 uye chero ramangwana vhezheni.
Kuti Ubuntu Webhu ive yemahara uye chaiyo imwe nzira kune Chrome OS Ichine basa rekuita, pamwe nekuti vavaki varo vanoshandawo paUbuntu Kubatana, asi zvirokwazvo vamwe vanozoziva kuti kunhuhwira uku kuripo mune ramangwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ubuntu Web 20.04.2 inosvika nechitoro chitsva, webhusaiti nyowani uye kwechinguva ichionekana neAnbox
Kukanganiswa muCAN BCM network protocol yakabvumidza mukana wekuwedzera mune linux kernel